Nea “Kristosom” Kyerɛ a Ɛresesa—So Onyankopɔn Ani Gye Ho?
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | June 1, 2000
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
FA NO sɛ womaa mfoniniyɛfo bi adwuma sɛ ɔnyɛ wo mfonini mma wo. Bere a owiei no, w’ani gyei; ɛte sɛ wo ara. Wususuw sɛnea wo mma, wo mmanana, ne wɔn mmanananom de anigye kɛse bɛhwɛ mfonini no ho.
Nanso awo ntoatoaso bi akyi no, w’asefo no mu biako te nka sɛ wo ti nhwi a apia kɔ akyi no nyɛ fɛ, enti ɔde nhwi no bi ka ho. Ɔfoforo nso mpɛ sɛnea wo hwene te no, enti ɔsesa no. Awo ntoatoaso a edi akyi ba no “yɛ nsakrae pii” ma enti mfonini no de nkakrankakra sesa a ɛnsɛ wo bio. Sɛ na wunim sɛ saa na ɛbɛba a, anka wobɛte nka dɛn? Akyinnye biara nni ho sɛ anka wo bo befuw.
Awerɛhosɛm ne sɛ, saa mfonini yi ho asɛm yɛ biribi sɛso, nea ɛfa Kristofo asɔre ho. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ, Kristo asomafo no wu akyi bere tiaa bi no, “Kristosom” fii ase sesae, sɛnea na Bible no adi kan aka no.—Mateo 13:24-30, 37-43; Asomafo no Nnwuma 20:30. *
Nokwarem no, ɛyɛ papa sɛ yɛde Bible nnyinasosɛm bɛbata amammerɛ ne awo ntoatoaso horow bi ho. Nanso ɛsono koraa sɛ wɔbɛsesa Bible nkyerɛkyerɛ ma ɛne nsusuwii a agye din bi ahyia. Na eyi pɛpɛɛpɛ na aba. Sɛ nhwɛso no, susuw nsakrae atitiriw a wɔayeyɛ no bi ho hwɛ.
Asɔre no ne Ɔman Ayɛ Biako
Yesu kyerɛkyerɛe sɛ ne nniso anaa N’ahenni no yɛ ɔsoro de, a ɛnkyɛ ɛbɛsɛe adesamma nniso nyinaa na adi asase nyinaa so tumi. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Ɛnyɛ adesamma amammui nhyehyɛe no so na ɛbɛfa adi tumi. Yesu kae sɛ: ‘M’ahenni mfi wiase.’ (Yohane 17:16; 18:36) Enti Yesu asuafo a na wodi mmara so no, twee wɔn ho fii amammuisɛm ho.
Nanso eduu afeha a ɛtɔ so anan wɔ Roma Ɔhempɔn Constantine bere so no, nnipa pii a na wɔfrɛ wɔn ho sɛ Kristofo no annya boasetɔ antwɛn sɛ Kristo bɛba na ɔde Onyankopɔn Ahenni no asi hɔ. Afei wɔde nkakrankakra sakraa adwene a na wɔwɔ wɔ amamuisɛm ho no. Europe—A History nhoma no ka sɛ, “ansa na Constantine reba no, na Kristofo mfaa wɔn ho nhyɛɛ [amammui] tumi ase sɛ ɔkwan a wɔnam so trɛw wɔn nyamesom mu. Wɔ Constantine akyi no, Kristosom ne amammui yɛɛ adwuma boom.” Kristosom a wɔadan ani yi bɛyɛɛ “amansan som” anaa “Katolek,” ɔsom a na wogye tom wɔ Roma Ahemman no mu.
Nhoma a ɛka nneɛma pii ho nsɛm Great Ages of Man ka sɛ esiane Asɔre—Ɔman nkabom yi nti, “eduu 385 Y.B. mu, mfe 80 akyi bere a wɔde ɔtaa kɛse a etwa to baa Kristofo so no, Asɔre no ankasa fii ase kunkum ɔsom mu awaefo, na na asɔfo no nso redi tumi te sɛ ahempɔn no ara.” Saa kwan no so na wofii ase de nkrante dii dwuma sɛ ade a wɔnam so bɛma obi asakra sen sɛ wɔne no bɛkasa, na asɔfo a wɔwɔ abodin, na wotumi gye tumidi besii asɛmpakafo ahobrɛasefo a wɔtraa ase wɔ afeha a edi kan no ananmu. (Mateo 23:9, 10; 28:19, 20) Abakɔsɛm kyerɛwfo H. G. Wells kyerɛw nsonsonoe akɛse a na “ɛda Kristosom a na ɛwɔ hɔ wɔ afeha a ɛtɔ so anan no mu ne Nasareni Yesu nkyerɛkyerɛ mu.” Saa “nsonsonoe akɛse” yi nyaa Onyankopɔn ne Yesu ho mfitiase nkyerɛkyerɛ no mpo so nkɛntɛnso.
Kristo ne n’asuafo no kyerɛkyerɛe sɛ “Agya Nyankopɔn koro” pɛ na ɔwɔ hɔ, na ne din Yehowa a epue bɛyɛ mpɛn 7,000 wɔ mfitiase Bible nsaano nkyerɛwee mu no ma ɔda nsow. (1 Korintofo 8:6; Dwom 83:18) Catholic Douay Version Bible no ka wɔ Kolosefo 1:15 sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ Yesu; ɔno ne “abɔde nyinaa abakan.” Enti sɛ́ onipa a wɔbɔɔ no no, Yesu kaa no pefee sɛ: “M’agya no yɛ kɛse sen me.”—Yohane 14:28.
Nanso ebeduu afeha a ɛtɔ so abiɛsa no mu no, asɔfo bi a wɔagye din, a wɔwɔ baasakoro nkyerɛkyerɛ a efi Hela nyansapɛfo Plato nkyɛn no so nkɛntɛnso no fii ase sakraa Onyankopɔn na ama ɔne Baasakoro nkyerɛkyerɛ no ahyia. Wɔ mfehaha a edii eyi anim mu no, saa nkyerɛkyerɛ a ennyina Bible so no maa Yesu so ma ɔne Yehowa yɛɛ pɛ, na ɛmaa Onyankopɔn honhom kronkron, anaa adeyɛ tumi no nso bɛyɛɛ onipa.
Ɛdefa gye a asɔre no gyee abosonsom Baasakoro nkyerɛkyerɛ toom ho no, New Catholic Encyclopedia ka sɛ: “Asɛm ‘Onyankopɔn biako a ɔyɛ Nipasu baasa’ no annya nnyinaso, na akyinnye biara nni ho sɛ saa nkyerɛkyerɛ no annye ntini wɔ Kristofo asetra ne gyidi a na wokura no mu ansa na afeha a ɛto so 4 no reba awiei. Nanso nkyerɛkyerɛ yi ara na Baasakoro nkyerɛkyerɛ a asete yɛ den no gyina so. Wɔ Asɔre Agyanom fam no, biribi a ɛte saa amma wɔn adwene anaa wɔn nsusuwii mu da.”
Saa ara nso na The Encyclopedia Americana ka sɛ: “Ɛdefa sɛnea Onyankopɔn te ho no, afeha a ɛtɔ so anan Baasakoro gyidi no nni nsusuwso biara wɔ afeha a edi kan Kristofo nkyerɛkyerɛ mu; na nea ɛne no bɔ abira no, wɔaman afi saa nkyerɛkyerɛ no ho.” The Oxford Companion to the Bible nhoma no frɛ Baasakoro sɛ “ɔsom mu gyidi a ɛbaa akyiri yi.” Nanso ɛnyɛ Baasakoro nko ne abosonsom nkyerɛkyerɛ a wɔde bɛhyɛɛ asɔre no mu.
Ɔkra no a Wɔsakra No
Nnipa pii gye di nnɛ sɛ nnipa wɔ ɔkra a ɛkɔ so tra ase wɔ owu akyi. Nanso so na wunim sɛ wɔde saa asɔre nkyerɛkyerɛ yi kaa ho akyiri yi? Yesu sii Bible mu nokware a ɛka sɛ “awufo nnim biribiara,” ne sɛ sɛnkyerɛnne kwan so no, wɔadeda no so dua. (Ɔsɛnkafo 9:5; Yohane 11:11-13) Nnipa betumi anya nkwa atra ase bio denam owusɔre so—‘sɔre a wɔsɔre gyina hɔ bio’ fi owu nna mu. (Yohane 5:28, 29) Sɛ ɔkra a enwu da wɔ hɔ a, ɛnde enhia owusɔre biara, efisɛ nkwa a owu nnim ne owusɔre nni abusuabɔ biara.
Yesu yɛɛ owusɔre a Bible kyerɛkyerɛ no ho ɔyɛkyerɛ denam nkurɔfo a onyanee wɔn fii awufo mu no so. Fa Lasaro a na wawu nnanan no sɛ nhwɛso. Bere a Yesu nyanee Lasaro fii awufo mu no, ofii ɔboda no mu bae sɛ ɔteasefo a ɔhome. Bere a Lasaro sɔre fii awufo mu bae no, ɔkra a enwu da biara ansan amfi ɔsoro anigye mu ammɛhyɛn ne nipadua mu. Sɛ saa na asɛm no te de a, anka na Yesu anyɛ no adɔe biara denam owusɔre so!—Yohane 11:39, 43, 44.
Ɛnde, ɛhe na ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ no fi bae? The Westminster Dictionary of Christian Theology ka sɛ nkyerɛkyerɛ no “fi Hela nyansapɛ mu mmom, na ɛnyɛ Bible adiyisɛm mu.” The Jewish Encyclopedia no kyerɛkyerɛ mu sɛ: “Gyidi a ɛne sɛ ɔkra no kɔ so tra ase wɔ owu akyi no yɛ nyansapɛ anaa nyamekyerɛ nsusuwii na emfi gyidi mu, wonhu saa nkyerɛkyerɛ no baabiara wɔ Kyerɛwnsɛm no mu.”
Mpɛn pii no, atoro biako tumi san foforo, na saa na ɛte wɔ ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ no ho. Ebuee kwan maa abosonsom nsusuwii a ɛne sɛ wɔyɛ nkurɔfo ayayade daa wɔ hellgya mu. * Nanso Bible no ka no pefee sɛ “bɔne so akatua ne owu”—na ɛnyɛ daa ayayade. (Romafo 6:23) Enti bere a King James Version nkyerɛase no reka owusɔre ho asɛm no, ɛka sɛ: “Na ɛpo yii n’awufo a ɛwɔ mu no mae, na owu ne hell yii awufo a ɛwɔ mu no nso mae.” Saa ara na Douay Bible no ka sɛ “ɛpo . . . ne owu ne hell yii wɔn awufo mae.” Yiw, sɛnea Yesu kaa no tiawa no, wɔn a wɔwɔ hell yɛ awufo, ‘wɔada.’—Adiyisɛm 20:13.
So wugye di paa sɛ daa asotwe a ɛwɔ hell nkyerɛkyerɛ mu no twe nnipa bɛn Onyankopɔn? Dabida. Wɔ nkurɔfo a wɔwɔ ɔdɔ adwenem no, ɛyɛ nsusuwii a ɛpam nnipa! Ɔkwan foforo so no, Bible no kyerɛ sɛ “Onyankopɔn ne dɔ” na mpo mmoa a wɔyɛ wɔn ayayade no yɛ n’akyiwade.—1 Yohane 4:8; Mmebusɛm 12:10; Yeremia 7:31; Yona 4:11.
“Mfonini” no Yɛbea a Wɔsɛe no Nnɛ Bere Yi
Wɔda so ara sɛe Onyankopɔn ne Kristosom yɛbea nnɛ. Nnansa yi ara nyamesom ho ɔbenfo bi kyerɛkyerɛɛ akasakasa bi a ɛkɔɔ so wɔ Protestant asɔre a ɔkɔ mu sɛ “asɔrefo no bi kyerɛ sɛ wɔmfa Kyerɛwnsɛm no ne asomafo gyidi no nyɛ adwuma na wonnyina Kristo tumidi akyi, na ebinom nso kyerɛ sɛ wɔmfa nnipa nsusuwii ne Kristosom mu ɔsesɛw nyɛ adwuma mma ɛne nnɛ nsusuwii nhyia. Asɛm a ɛda gua ne sɛ: Hena na ɔkyerɛ asɔre no nhyehyɛe kwan . . . Ɛyɛ Kyerɛw Kronkron no anaa adwenkyerɛ a wogye tom nnɛ no?”
Awerɛhosɛm ne sɛ, “adwenkyerɛ a wogye tom nnɛ” da so ara di akoten. Sɛ nhwɛso no, ɛda adi pefee sɛ asɔre pii asesa wɔn gyinapɛn wɔ nsɛm ahorow ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma ayɛ te sɛ nea wɔpɛ nkɔso na wɔda adwempa adi. Ne titiriw no, wɔ nsɛm a ɛfa abrabɔ pa ho mu no, asɔre no agyae nneɛma mu, sɛnea yɛkaa ho asɛm wɔ asɛm a edi eyi anim mu no. Nanso Bible no ka no pen sɛ aguamammɔ, awaresɛe, ne mmarima a wɔne mmarima da yɛ bɔne wɔ Onyankopɔn ani so, na wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛte saa no “rennya Onyankopɔn ahenni no.”—1 Korintofo 6:9, 10; Mateo 5:27-32; Romafo 1:26, 27.
Bere a ɔsomafo Paulo kyerɛw atifi hɔ nsɛm no, na amumɔyɛde ahyɛ Hela ne Roma wiase a na ɔte mu no mu ma. Ná Paulo betumi aka sɛ: ‘Ampa, Onyankopɔn danee Sodom ne Gomora butui ma ɛyɛɛ nsõ esiane nna mu ɔbrasɛe nti, nanso ɛno sii wɔ mfe 2000 a atwam ni! Ampa ara, ɛmfa saa bere a anibue aba yi ho.’ Nanso wamfa ɛno anyi ne ho ano; ɔpoe sɛ ɔbɛsɛe Bible mu nokware no.—Galatifo 5:19-23.
Hwɛ “Mfonini” a Edi Kan No
Bere a Yesu ne ne bere so Yudafo nyamesom akannifo no rekasa no, ɔkae sɛ wɔn som yɛ ‘ɔkwa efisɛ na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ.’ (Mateo 15:9) Saa asɔfo no yɛɛ ade koro no ara wɔ Yehowa Mmara a ɔde maa Mose no ho sɛnea Kristoman asɔfo yɛe na wɔda so ara yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ saa no—wɔde atetesɛm “mfoninnuru” akata nokware a efi Onyankopɔn hɔ no so. Nanso Yesu paa atoro nyinaa ho ntama de boaa nnipa komapafo. (Marko 7:7-13) Yesu kaa nokware no ɛmfa ho sɛ na nnipa pɛ anaasɛ wɔmpɛ. Ogyinaa Onyankopɔn Asɛm so kasae bere nyinaa.—Yohane 17:17.
Hwɛ nsonsonoe ara a ɛda Yesu ne wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ Kristofo no ntam! Nokwarem no, Bible no ka too hɔ sɛ: “Nkurɔfo betu adi nsɛm a aba foforo akyi, na . . . wɔbɛsoa akyerɛkyerɛfo aboa wɔn ho so, sɛnea wɔn ankasa akɔnnɔ te; na sɛ anka wobetie nokware no, wɔbɛdan akotie anansesɛm.” (2 Timoteo 4:3, 4, The Jerusalem Bible) “Anansesɛm” ahorow yi a yɛasusuw emu kakraa bi ho no, di awu honhom fam, bere a Onyankopɔn Asɛm mu nokware hyɛ den, na ɛkɔ daa nkwa mu. Eyi ne nokware a Yehowa Adansefo hyɛ wo nkuran sɛ hwehwɛ mu no.—Yohane 4:24; 8:32; 17:3.
^ nky. 4 Sɛnea Yesu daa no adi wɔ bɛ a ɛfa awi ne nwura no ho ne ne mfatoho a ɛfa ɔkwan hiahiaa ne ɔkwan tɛtrɛtɛ (Mateo 7:13, 14) ho mu no, nnipa kakraa bi na bere rekɔ so no, wɔbɛkɔ so de nokware Kristosom atra ase. Nanso na wɔn a wɔdɔɔso te sɛ wura, a wɔbɛhyɛ wɔn ho ne wɔn nkyerɛkyerɛ anuonyam no bebunkam sɛnea nokware Kristosom te ankasa so. Nsakrae yi na yɛreka ho asɛm no.
^ nky. 19 Wɔkyerɛ “hell” ase wɔ Hebri mu sɛ Sheol ne Hades wɔ Hela mu, a ne nyinaa kyerɛ tiawa sɛ “ɔdamoa.” Enti bere a King James Version Engiresi nkyerɛasefo kyerɛɛ Sheol ase mpɛn 31 sɛ “hell” no, wɔkyerɛɛ ase mpɛn 31 sɛ “ɔdamoa” ne mpɛn 3 sɛ “amoa,” a ne nyinaa kyerɛ ade koro no ara.
[Adaka/Mfonini wɔ kratafa 7]
Baabi a Edin Kristoni no Fi
Anyɛ yiye koraa no, wɔ Yesu wu akyi mfe du no, na wonim n’akyidifo no sɛ “kwan no” mufo. (Asomafo no Nnwuma 9:2; 19:9, 23; 22:4) Dɛn ntia? Efisɛ na wɔn asetra gyina gyidi a na wɔwɔ wɔ Yesu Kristo, a na ɔne “kwan ne nokware ne nkwa” no so. (Yohane 14:6) Afei wɔ bɛyɛ 44 Y.B. akyi no, ‘wɔnam ɔsoro akwankyerɛ so de edin Kristofo’ too Yesu asuafo no wɔ Antiokia. (Asomafo no Nnwuma 11:26) Wobegyee saa din yi toom ntɛm ara, wɔ aban mpanyimfo mu mpo. (Asomafo no Nnwuma 26:28) Din foforo no ansesa Kristoni asetra kwan, a ɛkɔɔ so dii Kristo nhwɛso akyi no.—1 Petro 2:21.
Ɛdenam Yehowa Adansefo asɛnka adwuma no so no, wɔkyerɛ nkurɔfo kwan kɔ Onyankopɔn Asɛm Bible no mu
Efi benkum, nea ɛtɔ so abiɛsa: United Nations/Photo by Saw Lwin
Share Share Nea “Kristosom” Kyerɛ a Ɛresesa—So Onyankopɔn Ani Gye Ho?
w00 6/1 kr. 4-7
So Nea Asɛmfua “Kristoni” Kyerɛ no Reyera?
Ohu Ɔdɔ Nyankopɔn No
Ma Wo “Nkwagye Anidaso” Mu Nyɛ Den!
‘Gye Wo Ho Ne W’atiefo Nkwa’
Wɔaboa Me Ma Madi Me Fɛre So
Nnwom a Ɛsɔ Onyankopɔn Ani
Ɛhe na Wubetumi Akɔhwehwɛ Afotu Pa?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 1, 2000
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 1, 2000
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 1, 2000